Indlu eyahlukileyo enesiza kwiReservoir yaseSulejów
Nikezela ngokuthe ngqo KUMNINI, WABUCA, UMNTU.
Ndirenta indlu yesitena eyahlukileyo enendawo ebiyelweyo, enomhlaba ngasemanzini kwidolophu yaseTresta Rządowa ekwiReservoir yaseSulejowski.
Indawo Super ngasehlathini, kufutshane elunxwemeni, echwebeni.
Zive ukhululekile ukurenta indlu yezitena ezimeleyo, evalelweyo enesiza esibiyelweyo ngasemanzini, kuwe kuphela.
Indawo yokuzonwabisa yasehlotyeni ikwidolophu yaseTresta Rządowa kwiReservoir yeSulejowski, malunga neekhilomitha ezingama-50 ukusuka eŁódź (Łódzkie Voivodeship), iikhilomitha ezili-100 ukusuka eWarsaw (ukufikelela ngendlela ekhawulezayo), malunga ne-180 km ukusuka eKatowice, malunga ne-2000. km ukusuka eLublin.
Isakhiwo sikhulu kakhulu, sicwangciswe kakuhle, i-conifers eninzi, i-spruces kunye neepayini ezityalwe, kodwa kwangaxeshanye kukho indawo yokutshisa ilanga okanye ukudlala ibhola (isiqingatha sendawo emthunzini, isiqingatha elangeni).
Yonke indawo ibiyelwe, inqanaba, ikhuselekile, i-microclimate, indalo entle yasendle, uxolo noxolo.
Kukho isitiya esitofotofo sokujingi esinemiqamelo, izitulo ezi-2, igrill enkulu ephathwayo, i-hammock, kunye netonela yokutshaya okhoyo kuphela. Kwi-terrace kukho ifenitshala yegadi kunye ne-cushions, i-sofa encinci.
Kuyenzeka ukuba udlale imidlalo eyahlukeneyo eshukumayo, kwaye ipaki yemoto ibiyelwe.
Indlu iqinile, izitena, imigangatho emibini kunye ne-terrace egqunyiweyo, kunye ne-balcony egqunyiweyo kunye nommandla omalunga ne-90 m2 (ukuba max. 6 abantu). Iqukethe igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo (ukuhanjiswa komoya ofudumeleyo kuwo onke amagumbi), ikhitshi, igumbi lokuhlambela elinendlu yangasese kunye namagumbi amabini ahlukeneyo aphezulu (isilingi yokhuni).
Indlu ingaphakathi emva kokuhlaziya, ngokuyinxenye inezixhobo ezitshintshwe (2017), kwaye emva kokulungiswa (2018).
Kwigumbi lokuhlala kukho i-sofa yesikhumba (i-fold-out) ene-armchairs, kwaye kwigumbi ngalinye lokulala eliphezulu kukho ibhedi ephindwe kabini kunye ne-mattress enqabileyo, ekhululekile kakhulu (i-Sembella) kunye ne-sofa edibeneyo.
Izilwanyana zasekhaya zivunyelwe umrhumo wexesha elinye we-PLN 100.
Yonke into Ukuxhotyiswa Ngokupheleleyo (zokutya, iipleyiti, CASSEROLES) zezi, (UMBANE, AMDAKA, AMANZI KWI THE CITY AMANZI) ashushu, ishawari, TV digital Decoder, Electric COOKER, Electric COOKER).
IINDAWO ZOKULALA, UKUCOCA, ZONKE IZINDABA ZIBANDAKANYELWE KWIXabiso, NGAPHANDLE
UMLITI OWENZAYO WOKUSHISA INDLU (UKONGEZELELWE IHLAWULWE).
Kummandla osondeleyo, amahlathi amakhulu, amakhowa, iziqhamo zehlathi, iintlanzi kwi-brine. Ukuya elunxwemeni lwechweba, kumgca ochanekileyo, kukho malunga neemitha ezingama-200 zebhanti elikhuselayo lehlathi elihle lepineyini, elenza i-microclimate kunye nephunga elimangalisayo. Kukho ulwandle oluhle, olubanzi lwesanti ngasechwebeni, amanzi ashushu angekho nzulu. Kukho ithuba lokuqesha izixhobo zemidlalo, i-gastronomy encinci, ibha kwinkampu. Kwilali yaseSmardzewice, kukho imarike egcweleyo. (Tomaszów Mazowiecki).
Kwiindawo ezikude, kukho indawo yokuzalela iinyathi, imyuziyam evulekileyo, ipaki enemithombo eluhlaza, imiqolomba yokutyelela, isixeko saseTomaszów Mazowiecki.
AMAXABISO OMHLE - - zonke iindleko zibandakanyiwe - akukho ntlawulo yongezelelweyo (ngaphandle kokufudumeza)
NDIKUMEMA UKUBA URESHISE UKUSUKA NGE-15 KA-APRILI UKUYA NGE-15 OKTOBHA.
NDIYAREntela KWEZINYE INDAWO;
- INDLU EZIMELEYO, EZIMILEYO ELAKE GŁUSZYŃSKIE;
- INDLU EZIMELEYO, EZIMILEYO ELAKE LUGOWSKIE;
Kummandla osondeleyo, amahlathi amakhulu, amakhowa, iziqhamo zehlathi, iintlanzi kwi-brine. Kukho malunga neemitha ezingama-200 zehlathi elihle lepine kumgca othe tye ukuya elunxwemeni lolwandle, olwenza i-microclimate kunye nephunga elimangalisayo. Kukho ulwandle oluhle, olubanzi lwesanti ngasechwebeni, namanzi ashushu angekho nzulu. Kukho ithuba lokuqesha izixhobo zemidlalo, i-gastronomy encinci. Kwilali, ivenkile ethengisa ukutya, ibha. Kunokwenzeka ukuba uthenge ukutya okulungiselelwe kwinkampu (idatha esuka kwi-2020).
Ndihlala ndisiza neendwendwe ndizozithatha mhla zihamba.
Qhagamshelana nam ngefowuni ((INOMBOLO YOMnxeba EFIHLEKILEYO))